MITOHY NY HAMEHANA ARA-PAHASALAMANA: Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 400 eto Antananarivo – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:44
Nitafa tamin'ny vahoaka ny Praiminisitra omaly.
Accueil/Politika/MITOHY NY HAMEHANA ARA-PAHASALAMANA: Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 400 eto Antananarivo
MITOHY NY HAMEHANA ARA-PAHASALAMANA: Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 400 eto Antananarivo
Mbola tafiditra ao anatin’ireo toerana mbola ahitana trangana Coronavirus hatrany ny eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Noho izany indrindra no nahatonga ny Fitondram-panjakana nandray fepetra tsy mbola fahafahana mamory olona mihoatra ny 400 mba hahafahana mifehy ny mety ho fihanaky ny valanaretina indray.
Lucien R. 28 juin 2021
Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny Filoham-pirenena tany amin’ireo Filohana Andrimpanjakana eto amintsika, dia tapaka fa mitohy mandritra ny 15 andro manaraka indray ny Hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny Tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Nisy koa, noho izany, ireo fepetra maromaro vaovao noraisina mifanaraka amin’izany. Voalohany indrindra amin’izany ny mbola tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny 400 amin’ireo Distrika enina mbola tena ahitana trangana Coronavirus, dia Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany. Na izany aza anefa, noho ny efa fihenan’ireo olona mararin’ny Coronavirus ankehitriny, nanapa-kevitra ny Fitondram-panjakana fa mikatona daholo ny Centre de Traitement Covid-19 (CTC-19) rehetra manerana ny Nosy, afatsy ny CTC-19 Village Voara Andohatapenaka ihany. Afindra eny an-toerana koa ny PNGN etsy Mahamasina, sy ny COVDATA, araka ny nambaran’ny Praiminisitra omaly. Ity farany izay nilaza fa tsy niova ny fepetra ho an’ireo razana matin’ny Covid-19. Izany hoe, tsy azo entina mivoaka ny Faritra nahafatesany ny razana ary tsy maintsy halevina amin’ny andro nahafatesany ihany koa.
Afaka mikarakaraka lanonana ankalamanjana
Mahakasika ny fepetra amin’ny ankapobeny, dia fantatra fa mitohy ny fampiharana ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina, saingy manomboka amin’ny 12ora alina izany manomboka izao, ary mifanarana amin’ny 4ora maraina. Marihana fa ireo distrika enina voalaza tetsy aloha ihany no iharan’izany. Mbola mikatona ihany koa ny toeram-pandihizana amin’ireo distrika enina ireo. Amin’ireo Faritra sy Distrika hafa kosa anefa, dia efa azo atao ny mikarakara lanonana ankalamanjana mba hitsinjovana ireo mpanakanto, araka ny fanambaran’ny Praiminisitra. Ity farany izay nanipika mazava fa tokony ho ao anaty fanajana fepetra hatrany ny fanatanterahana izany. Hatreto, nanapa-kevitra ny Fanjakana ny tsy mbola hanokafana ny fitaterana mitondra olona avy any ivelany. Na izany aza anefa, nilaza ny Praiminisitra, Ntsay Christian, fa eo am-pandinihana ny fivoaran’ny valanaretina eto an-toerana sy any ivelany ny Fanjakana ankehitriny, ka ny zava-misy ao anatin’ny 15 andro manaraka no hamaritra ny fepetra horaisina manaraka, araka ny nambarany. Etsy ankilany, mitohy ny sidina anatiny, mitohy mifanaraka amin’izany koa ny fanaovana fitiliana eny am-piaingana ho an’ireo mpandeha. Ankoatra izay, ny Governora isam-paritra dia afaka mandray fepetra mifanaraka amin’ny zava-misy any amin’ny Faritra iadidiany avy, saingy hiarahana manapaka amin’ny Minisiteran’ny Atitany izany.
Nandritra ny fandaharana nataony omaly, nanantitrantitra ny Praiminisitra fa miankina amin’ny tsirairay ny tsy idirantsika intsony ao anatin’ny 3ème Vague amin’izao ady amin’ny Covid-19 izao. Mitohy, hoy izy, ny ezaka ataon’ny mpisehatra tsirairay, dia ny Fanjakana, ny Mpiasan’ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana, saingy ny tsirairay mihitsy no mila mitohy manaja ireo fepetra sakana rehetra tsy hiparitahan’ny Coronavirus intsony.
ADY AMIN’NY COVID-19 : Hofehezina ny vidim-panafody, mihiboka Analamanga rehefa Sabotsy sy Alahady
GOVERNEMANTA: Tsy ho ela intsony ny fanendrena ireo mpikambana vaovao
FAHA-62 TAON’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA: Tsy nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ambanin-javatra
VAKSINY COVID-19: Firenena maro nanatsahatra ny fampiasana azy
ADY AMIN’NY FAMPIASANA ANKIZY : Nitanisa ireo ezaka rehetra efa nataon’i Madagasikara ny Vadin’ny Filoha